Budata TikTok vidiyo na-enweghị mmiri mmiri
A naghị akwado njikọ gị !!!
Tiktokfull bụ otu n&#39;ime ihe nbudata TikTok kacha mma dị na ntanetị iji budata vidiyo TikTok na enweghị akara mmiri. Achọghị ka ị wụnye ngwanrọ ọ bụla na kọmputa gị ma ọ bụ ekwentị gị, ihe niile ị chọrọ bụ njikọ vidiyo TikTok, na nhazi niile a na-eme n&#39;akụkụ anyị ka ị wee bụrụ otu pịa pụọ na nbudata vidiyo na ngwaọrụ gị.
Download vidiyo si na weebụsaịtị
1. Chọta vidiyo - kpoo vidiyo ịchọrọ ibudata na ekwentị gị, jiri ngwa TikTok.
2. Detuo njikọ vidiyo - detuo url vidiyo site na weebụsaịtị
3. Ibudata - laghachi na Tiktokfull ma mado njikọ ahụ n'ọhịa ederede na ibe ma pịa "Download"
Download video nke ndi ntughari site na ngwa mkpanaaka
2. Detuo njikọ vidiyo - pịa "Ekekọrịta" (bọtịnụ akụ n'elu vidiyo ahọrọ), wee pịa "Detuo njikọ".
3. Ibudata - laghachi na Tiktokfull ma mado njikọ ahụ n'ọhịa ederede na ibe ma pịa "Download".
Na-ekiri vidiyo TikTok na mkpanaka na desktọọpụ
Ihe nlele na ntinye ihe maka TikTok. Lelee Tik Tok n&#39;ụdị dị mma site na ihe nchọgharị gị ma ịnwere ike ibudata vidiyo TikTok ị na-ele na-enweghị mmiri mmiri site na redirect
Etu esi lelee TikTok na kọmputa
1. Mepee google chrome extension - chọọ TikTok Mobile View & No Watermark Download.
2. Wụnye ndọtị
3. Mepee weebụ TikTok - wee pịa na ndọtị iji lee ahụmịhe mkpanaka
Also na-etinye mgbakwunye ebe a
Ihe nbudata vidiyo nke TikTok maka gam akporo
Maka ndị ọrụ gam akporo, anyị mepụtara ngwa mara mma nke na-arụ ọrụ dị ukwuu na ekwentị mkpanaaka na mbadamba gam akporo. A na-akpọ ngwa ahụ zzTik
Budata Tik Tok vidiyo na-enweghị mmachi mmiri na otu mgbata.
Jiri ulo oru mgbasa ozi weputa egwu & vidiyo.
Soro ndị enyi kesaa vidiyo.
Budata zzTik App ebe a
Etu esi ebudata vidiyo Tik Tok na iPhone?
Nwere ike ibudata vidiyo Tik Tok na-enweghị mmiri mmiri na iPhones naanị na nbudata ntanetị yana site na ihe nchọgharị Safari nke ngwaọrụ Apple. Gaa na vidiyo Tik Tok na iPhone ma ọ bụ iPad gị ma detuo URL nke vidiyo, foto, ma ọ bụ egwu. Gaa na nchọgharị Safari ebe ebe nrụọrụ weebụ SaveFrom.net meghere. Tapawa njikọta na mpaghara ntinye ma pịa bọtịnụ aka nri nke ubi ahụ. Na obere sekọnd, ị ga-enweta njikọ maka nbudata.
Ebee ka m nwere ike ịhụ faịlụ ndị ebudatara?
Mgbe ibudata vidiyo TikTok, egwu ma ọ bụ foto, enwere ike ịchọta faịlụ niile na folda ahụ, nke edoziri ya iji chekwaa ọdịnaya niile na .ntanetị. Ọ bụrụ na ịnweghị ntọala ndị ọzọ, mgbe ahụ nchekwa nchekwa a na - akpọ â € œDownloadsâ €.
Etu ibudata tiktok
Nwere ike ibudata ngwa TikTok site na google kpọọ maka android ma ọ bụ ụlọ ahịa apụl maka ios. Mepee google play ma ọ bụ ụlọ ahịa apụl wee chọọ TikTok, ị nwere ike ịhụ ngwa TikTok maka ibudata na ekwentị gị. Ọ bụrụ na mpaghara gị nwere ike ịhụ ngwa TikTok, ị nwere ike ịgbanwe mpaghara na US ka ibudata
Ọ zzTik bụ n&#39;efu?
zzTik bụ ngwa Ihe nbudata vidiyo bụ n&#39;efu iji budata vidiyo TikTok na enweghị mmiri. Also na-elele vidiyo vidiyo Tik Tok na ngwa a dị mfe ma dị mma